Amnesty International: Beeraleyda Soomaalida ah ee uu Mareykanku u laayay Argagixisanimo. - Latest News Updates
Amnesty International: Beeraleyda Soomaalida ah ee uu Mareykanku u laayay Argagixisanimo.
War saxaafadeed ay soo saartay hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in Milateriga Maraykanka ay si weyn isaga indha-tireen dadka rayidka ah ee ku dhinta duqeymaha ay ka geystaan Soomaaliya.
Tan iyo Markii uu maamulka Aqalka Cad ee Mareykanka ee Mareykanka la wareegay Donald Trump waxaa aad u sii xoogeystay howlgalladii ay Mareykanku ka wadeen Soomaaliya, waxayna si toogto ah Washington u sheegataa inay weerarradeeda khasaare ugu geysatay kooxda Al-Shabaab ee gacan saarka la leh shabakadda Al-Qaacidda, kuwaasoo uu Mareykanku u aqoonsan yahay dhaqdhaqaaq ‘argagixiso ah’.
Hase yeeshee Amnesty International ayaa sheegtay in duqeymahaas ay saameyn aad u ballaaran ku yeeshaan dad rayid, Soomaali ah, oo u badan beeraley.
War saxaafadeedka ugu dambeeyay ee ay maanta oo ah 1 October, 2019 soo saartay hay’addan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa lagu yiri:-
Sida lagu xusay War-saxaafadeedkan, Baaritaan ay samaysay hay’adda Amnesty International ayaa muujinaya in saddex nin oo milateriga Maraykanka uu duqeyn ku dilay bishii Maarso iyagoo loo beegsaday inay yihiin “argagixisada Al-Shabaab” ay ahaayeen beeraley rayid ah, isla markaana aanay jirin caddeyn muujinaysa inay wax xiriir ah la lahaayeen ururkaasi.
Maxaa kale oo lagu yiri War-saxaafadeedka?
Image captionMareykanka labadi sano ee la soo dhaafay wuxuu Soomaaliya ka fuliyey 110 duqeymo dhinaca cirka ah
Warbixinta ay soo saartay Amnesty oo nuqul ka mid ah lasoo gaarsiiyay BBC-da ayaa lagu xusay dhacooyin kale oo waxyeello loogu geystay dad rayid ah.
Howlgalka sirta ah ee Mareykanka uu ka wado Soomaaliya
Isbaddalka uu Madaxweyne Trump ku sameeyay weerarradii Mareykanka ee Soomaalia
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarrada xagga cirka ee ay ku bartilmaameedaadaan fariisimaha kooxda Al Shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya, inkastoo marar badan ay cabasho kasoo yeerto dad rayid ah oo si khaldan loo beegsaday.